अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – Chautari Online
काठमाडौ – भारतकी एक युवतीले यस्तो पेन्टी बनाएकी छिन्, जसले युवतीहरुलाई बलात्कारबाट बचाउन सक्छ । १९ वर्षकी सीनू कुमारी उत्तर प्रदेशको र्फरुखाबाद जिल्लाको एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका हुन् । उनले बनाएको ‘रेप प्रुफ पेन्टी’मा एक प्रकारको लग लागेको हुन्छ, जसले बलात्कारबाछ बचाउनसक्छ । ब्लेड प्रुफ कपडा प्रयोग गरिएको छ, जसलाई काट्न वा जलाउन सकिँदैन । साथै स्मार्ट लक, जीपीआरएस र एक रेकर्डर पनि छ । स्मार्ट कल पासवर्डले मात्र खुल्नेछ । सीनू भन्छिन्, ‘यसमा एउटा बटम छ, जसलाई थिच्नासाथ इमर्जेन्सी वा १० नम्बर डायल हुनेछ ।’ उनका अनुसार पेन्टीमा राखिएको जीपीआरएसको मदतमा प्रहरीले लोकेसन पत्ता लगाउनेछ र रेकर्डरले आसपासमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई रेकर्ड गर्नेछ । पुलिसका अलावा परिजमरका कुनै सदस्यको नम्बर सेट गर्न सकिन्छ ? सीनू भन्छिन्, यो सेटिङमा भरपर्छ कि इमर्जेन्सीमा पहिला कसलाई कल गर्ने ? किनकी
एजेन्सी, २२ असाेज । बिहेकै दिन बेहुलाले कुटेर बेहुलीको हत्या गरेका छन् । घटनाको रुसको नोबासिबिरिकको हो । ३३ वर्षका यी बेहुलाले अन्य पाहुनाकै अगाडी बेहुलीलाई कुटेर मारेका हुन् । ओकासाना नामकी बेहुली ३६ वर्षकी थिइन् । डरका कारण बेहुलीलाई बचाउन भने कोही पनि सरेनन् । यस पार्टीमा सबै पाहुनाहरु रक्सीले मातेका थिए । प्रहरीले आरोपित युवकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । प्रहरी स्रोतकाअनुसार स्टिफन डोलगिख नामका यी युवक यसअघि पनि हत्या तथा लुटपाटको आरोपमा जेल बसिसकेका छन् । डोलगिखले पुरानो अपराधका लागि जेल जीवन बिताइरहेका बेला ओकसानासँग उनको चिनजान भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यसपछि उनीहरुले बिहे गर्ने फैसला गरेका थिए । स्थानीय प्रहरीकाअनुसार बिहे भोज चलिरहेका बेला बेहुला–बेहुलीबीच झगडा भयो, त्यसपछि बेहुला आवेशमा आए । रक्सीले मातेका बेला अन्य एक युवकको डाहा लागेपछि उनले श्रीमतीमाथि कुटपिट थाले । अनुस